Akazange anyuke aye eZiyon aze atshatyalaliswe eAuschwitz, uRebhi wabaxelela ukuba bangenyuki. URabhi uMichael Avraham
Akazange anyuke aye eZiyon aze atshatyalaliswe eAuschwitz, uRebhi wabaxelela ukuba bangenyuki.
Iimpendulo > Udidi: Ukholo > Akazange anyuke aye eZiyon aze atshatyalaliswe eAuschwitz, uRebhi wabaxelela ukuba bangenyuki.
Ndihlazekile ziintloni Ubuzwe kwiinyanga ezi-5 ezidlulileyo
Usapho lwam lwanelisekile kukubuyela eZiyon. (Elandela intiyo yeeNtlanga ezijikelezileyo, babezizityebi ngokugqithiseleyo kwaye bengaswelanga nto)
URebbe wabaxelela ukuba bahlale elubhacweni waza wabathembisa ukuba kuya kuba kuhle.
Kholelwa ukuba umvukeli akazange abuyele eZiyon noEfrayim eAuschwitz ye-XNUMX kwaye negazi lembewu yabo nalo liphuma kumvukeli owathembisayo nangenxa yedinga labo latshatyalaliswa.
Kodwa kuYeremiya XNUMX ngokuchaseneyo abaprofeti bobuxoki bakhuthaza ukubuya kweZiyon noYeremiya egameni likaThixo uthi hayi.
Eminye nje iminyaka engama-70
Kwaye ngoku lo mkhuba ujikiwe, eBhabhiloni mhlawumbi siya kwakha izindlu size sitshate nabafazi. Nabemi baseYerusalem ukuba baxhelwe nendlala.
Ke yintoni elungileyo?
Ukubuyela eZiyon okanye ngokuphambeneyo ukuze uhlale ekuthinjweni?
Le yintambo enzima. Yonke into iyodwa. U-rebbe owathi uluvo lwakhe ukuba angezi ngezizathu zakhe, wathetha into esemthethweni ngokupheleleyo. Oko ekugqibeleni kuhambe kakubi akumnyanzeli kwisiphumo. Akukho gazi lamntu lisesandleni sakhe. Ukuba wenza izithembiso ezingakhathaliyo mhlawumbi ngaphezulu.
Ngokuphathelele abaprofeti, bathi izinto ulwazi lwesiprofeto, ngoko kukho ingxoxo eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ukuba bathe benza isithembiso egameni leNkosi.
Ngokubanzi, impendulo kumbuzo wokuba ngaba ukufudukela kwelinye ilizwe akusoloko impendulo efanayo. Ngamanye amaxesha kulungile ukunyuka kwaye ngamanye amaxesha hayi. Nangona kukho umyalelo wokuhlalisa umhlaba, kodwa umprofeti ususa nantoni na kwiTorah kwiHolocaust okanye ngeyure.
ISociology kunye nesiseko Vula Ngokusweleka kongasekhoyo uProf David Halvani Weiss (uluhlu lwama-485)